Iyo Apple Watch inogona kuchinja nzira yaunopinda mapassword | Ndinobva mac
Apple Watch inogona kuchinja nzira yaunopinda mapassword
Rimwe remabasa ari ek Apple Watch ndiyo mukana wekuvhura Mac yedu, kubva pachiuno nekupinda mapassword edu ekuwana. Basa rinobatsira kwazvo uye izvo zvinotidzivirira isu kupinda kodhi yakasarudzwa kuti tiwane ruzivo pane komputa yedu.
Unogona here kufungidzira kuti zvaigoneka kuti iyi sarudzo inogona kushanda, kwete chete kuwana Mac yedu? Isu tinokwanisa kuwana iwo akajairika mawebhusaiti anoda password, nekungobaya bhatani pane wachi yedu. Izvo kwete zvekungotaurira iyo nguva kana kurekodha mabhatani edu, izvi zvinogoneka zvagadzirwa, izvo nenzira, zviri kuwedzera kukosha muApple.
Iyo Apple Watch inogona kutibatsira zvakanyanya nemapassword edu.
Kunyangwe isu tiine maMacs, mukana wekupinda mapassword kuburikidza neTouch ID uye mu iPhone kuburikidza neFace ID, dzimwe nguva, iwe unofanirwa kuvapinda iwo manyore. Pfungwa, Icho chingave mukana wekugona kuzvisimbisa pachedu mune imwe Webhu nekushandisa, nekudzvanya bhatani pane yedu Apple Watch.
Zvechokwadi, Microsoft inokwanisa kuisa password inogadzirwa nekushandisa kwayo, yechokwadi, kuburikidza neApple Watch, kuwana kushanda uye kugona, kana tichifanira kuwana mamwe masevhisi emukwikwidzi weApple.
Aya marudzi ekushandisa, akadai seyechokwadi, ari yakaratidzirwa kuve inoshanda kupfuura mapassword akasimba akasarudzika nasarudzo, senge Apple's password maneja, uye kunyanya avo vakasarudzwa nemushandisi. Dzimwe dhata dzinoti 51% yemaphasiwedi anoshandiswa zvekare.
Nok Nok Labs, yakaratidza chishandiso chinoenderana nerudzi urwu rwechokwadi, iyo inotarisira kuti kuwana kweWebhu uye zvimwe zvinoshandiswa zvinogona kuitwa nekuzvisimbisa, kuburikidza neApple Watch. Zvingawana izvozvo mushandisi anopinda mapassword kana makodhi ekuwana mune imwe nzira uye uve nechokwadi chekuti vamwe havagone.
Panzvimbo pekukumbirwa password, wachi yacho yaizongokumbira iwe kuti utore cheki chiratidzo kuti ubvumire kupinda pa iPhone yako, iPad kana Mac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inogona kuchinja nzira yaunopinda mapassword
xPlan: chishandiso chakanakisa kubata mapurojekiti ako
MacOS Catalina iri kupa mamwe makomputa asingashandisike